India : Hadisoana, Media Ary Mumbai · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2018 16:40 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, srpski, English
Nitondra bebe kokoa ny fijerin'ny media ho ao India ireo fanafihana tao Mumbai. Fantatr'izao tontolo izao ankehitriny ny toedraharaha saropady misy ao India, marobe ireo firenena nandefa sahady torolalana fanairana ho an'ireo mpivezivezy ho any India. Nofoanan'ny ekipam-pirenena anglisy mpilalao ‘cricket’ ny fandraisany anjara amin'ireo lalào fitsapàna tokony hataony. Saingy angamba ny sasany amin'izao tontolo izao efa nanadino sahady ka zavatra hafa no iasan'ny sainy.
‘CNN, MSNBC ary FOX, samy tsy alehany‘, hoy ny horak'i Ptcbus, izay monina ao Etazonia, tao amin'ny bilaogy ‘Random Rambles':
“Niezaka namantatra izay nitranga tao Mumbai (omaly) hariva ao. Ary ny hany mba hitako dia i Anderson Cooper nanolotra ny amboara taminà olona tsy haiko intsony hoe iza, ilay fandaharana Hannity’s America ao amin'ny fahitalavitra Fox TV ary fanadihadiana iray momba ireo fonja tao amin'ny MSNBC. Fa maninona ireo no antsoina hoe fantsombaovao tsy tapaka? Voatery aho niantehitra tamin'ny BBC sy tamin'ireo tranonkala indiana mba hijery ireo lahatsary vao haingana indrindra sy hahita ny vaovao. Nefa inona no antenain'ireo fantsona ireo ho azony amin'ny fikobonana ny Amerikana ho ao anatin'ny tsy fahalalàna izay zavatra mitranga manerana izao tontolo izao ? Ry media amerikàna, henatra ho aminareo!
10:27 alina, ny 27 Novambra: ny hany fantsona fahitalavitra mandefa vaovao momba an'i Mumbai amin'izao fotoana izao dia ny CNBC (fantsona mivoy ny resaka toekarena). Mampalahelo!”
Sarin'ny pejy voalohany tamin'ireo gazety tao Mumbai: sary avy tamin'ny flickr an'i James Cirdland, nampiasàna lisansa Creative Commons
Ary mba ahoana ny amin'ireo media indiàna ? Hadisoana ve ny nanaovan'izy ireo fandrakofana tsy tapaka ny zavatra nitranga? Tokony ho afaka nanampy tamin'ny fomba mahomby ireo polisy tao Mumbai ve ry zareo? “Narary saina” ihany koa ve ry zareo ireo ? ‘Eny !’ hoy i Veetrag mamaly ao anatin'ny lahatsorany, “Resin'ny vola ny fitandremana“:
“Ny zavatra nisongadina aloha dia ny tsy fahatsiarovan-tena ho tomponandraikitra nananan'ireo media. Ny mampita vaovao ho an'ny vahoaka no anjaran'ny media, fa amin'ny fomban'olona tomponandraikitra, tsy mila mandefa vaovao saropady. Mijery ireo fantsona indiàna aho – NDTV, IBN-CNN, India TV, Sahara Samay, Star News sy maro hafa koa, ary dia tsy nahita na iray aza nanao tsara ny asany araka ny tokony ho izy. Nandritra ireny zavadoza nitranga ireny, nandraman-dry zareo ny hampientanentana sy hanao ny vaovao ho manaitaitra ary dia tamin'ny fomban'olona tsy tomponandraikitra no nanaovany izany.
Hadisoana voalohany : mampita vaovao saropady ry zareo, toy ireo fihetsiketsehan'ireo mpitandro filaminana sy ny polisy. Azoko antoka fa tsy misy ilàna azy io vaovao io, ho an'ireo mpijery fahitalavitra amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao, ny ilain'ny olona dia ny mahafantatra hoe aiza ny havany, hopitaly aiza no nitondràna ireo naratra, sokajin-drà toy inona no ilaina ary aiza. Tena zavatra mavesa-danja tokoa, ary tena ilaina. Eny, tena ilain'ny olona ny mahafantatra hoe tanàna aiza no azo antoka, ahoana ny fivoaran'ny toedraharaha, fa tsy vaovao mitsitaitaika isa-minitra. Misy ny sahoan-dresaka (mety ho marina) hoe ireny vaovao ireny dia ilain'ireo mpampihorohoro izay mety hampiasa azy hiadiana amin'ireo feno fahavononana miezaka ny hiaro ny aintsika”.
Hivoaka velona amin'io fandripahana io ve i Mumbai sa nandresy ireo mpampihorohoro ? Manamarika i SriRam Vadlamani ao amin'ny Indianomics, bilaogy firesahany momba ny toekarena hoe :
“ Nahomby ve ry zalahy ?
• ny Alakamisy, nakatona ny BSE sy NSE, ireo toerana roa fandraharahàna ara-bola indiàna goavana indrindra.
• Niverenana nojerena ny naotin'i India tao amin'ny Standards & Poors saingy tafajanona amin'ny toerany ihany no niafaràny.
• Nisintaka tsy hanao ny lalao cricket izay tokony natao tao India i Angletera, ary misaintsaina momba ireo lalao fitsapàna.
• Nahemotra ny “ligue des champions”
• Samy namoaka torolalana fanairana ho an'ireo mpivezivezy mihevitra ny ho any India ny ankamaroan'ny firenena.
• Very maherin'ny 6% amin'ny sandany amin'izao fotoana ny petrabola amin'ireo orinasanà trano fandraisambahiny sy ny fitaterana an'habakabaka indiana”.
Na izany aza, mahamarika singa maha-velom-panantenana ihany izy : 7.6% ny harinkarena faobe. Nidina 8.84% ny sondrobidim-piainana, izay, hoy izy manampy, “farafaharatsiny mba zavatra kely afaka ireharehàna” :
“Nahomby ireo mpampihorohoro, amin'ny lafiny sasany. Saingy ny Sensex (tondro ho an'ny tsenambola ao India) dia nahatohitra ary nahaporofo ny fahamatorany. Tsy nilentika isa 1.000 izy, na teo aza ilay fisavoritahana. Ireo petrabola sasany toy ny an'ny sehatry ny fizahantany, ny trano fandraisambahiny sy ny fitaterana an'habakabaka ihany no voadona, araka izay efa nandrasana. Ho voadona ny sehatry ny fizahantany, ny trano fandraisambahiny ary ny fitaterana an'habakabaka, fa tokony ho afaka manohitra izany ireo sehatra hafa. Mandritry ny volana vitsivitsy, angamba mety hivala-ketraka ireo mpampiasa vola, saingy hitsambikina indray i India. Raha misy zavatra tsara mety hipongatra avy amin'izany, dia porofon'ny fahatanjahana sy faharetan'i India sy ny toekareny, ary, ny tena zavadehibe indrindra, ny vahoakany.”
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fandrakofana manokana tontosain'ny Global Voives momba ireo fanafihana tao Mumbai , ao India, ny 26, 27, 28 Novambra 2008.